Karaamardha Hospital: Gabadh u Dhimatay Taws Liyuu Boolisku Gaadhsiiyey. – Rasaasa News
May 6, 2014 Boolisku, Gaadhsiiyey., Karaamardha Hospita, l: Gabadh, Liyuu, Taws, u Dhimatay
Jijiga, May 6, 2014 – Gabadh lagu magacaabi jiray Dulmar Ismaaciil, oo muddo la xanuunsanayd gunaadsan ka gaadhay Naaska, ayaa ku dhimatay Isbitaalka Kaaraamardha.
Marxuumad Dulmar Ismaaciil oo da,adeedu ahayd 23, waxay mudo dheer la ildarayd xanuun ka hayey Naaska bidix, kaas oo bilishii June 2012 iyada oo joogta degmada Gunagado ee gabalka Jarar uu binid ka galiyey Naaska nin ka tirsan ciidanka Liyuu Booliska.
Dulmar Ismaaciil, waxay dhakhtar u tagtay magaalooyinka Jijiga iyo Dir-Dhaba. Waxayna dhakhaatiirtu u sheegeen in ay u baahan tahay dhakhtar dibadeed, kaas oo ayna awoodin qoyska Dulmar. Dulmar Jijiga waxay dul saarayd dad ay ehel yihiin.
Dakhtarka dawo dhaqameedka Shiinaha ee ku yaal magaalada Jijiga, ayaa kolkii dambe dawo aan la aqoon siin jiray mudho dhawr bilood ah.
Dad badan oo degaanka jooga, waxay la ildaran yihiin taws ay u gaystaan ciidanka Liyuu Boolisku. Magaalada Qab-dahar waxaa jooga gabadh go,an Naaska intiisa hore, taas oo uu qaniinyo kaga goostay nin ka tirsan Liyuu Boolisku.
Karatee oo Kilalka Tagay